Honda Legend ကို ဒီဇိုင်းပိုင်းပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြီး Website မှာထုတ်ဖော်ပြသခဲ့တဲ့ Honda Motor Corporation! – AutoMyanmar
ဒီဇိုင်းပိုင်း ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ Honda Legend ကိုလာမယ့် ၂၀၁၈ ဖေဖော်ဝါရီလ မှစတင်မိတ်ဆက်မှာဖြစ်ပေမယ့် website ပေါ်မှာပုံအချို့ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Honda Legend ကအခုလက်ရှိမှာတော့ Sport Hybrid SH-AWD (Super Handing All-Wheel Drive) ပါဝင်တဲ့ Fifth-generation အထိထွက်ရှိထားပါတယ်။
ကားအင်ဂျင်နဲ့ မော်တာတွေကိုဖြတ်ပြီး ကားဘီးလေးလုံး လုံးမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ Hybrid System လည်းပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Honda Legend ကိုတော့ ၂၀၁၄ နိုဝင်ဘာလမှာ စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဖြန့်ချီခဲ့တာကတော့ ၂၀၁၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်နေ့ပါ။
အခု Honda Legend ကို ဒီဇိုင်းပိုင်းပြန်ပြင်ရာမှာ အဓိက ပြောင်းလဲသွားတာတွေကတော့ကားကိုယ်ထည်နဲ့ Chassis နံပါတ် တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကားရဲ့လက်ကိုင်ကို ထိန်းချုပ်ရတာပိုမိုလွယ်ကူအောင် Handling performance ကိုလည်းတိုးမြှင့်ထားပါတယ်။ Handling performance ကိုတိုးမြှင့်ထား တာကြောင့် စီးနှင်းရတာလည်းပိုပြီး အဆင်ပြေချောမွေ့မှာပါ။
ကားရဲ့ပြင်ပ ဒီဇိုင်းကို trapezoidal ပုံစံဖန်တီးထားပြီး ကားပြင်ပ ကိုယ်ထည်ကိုလည်း Upgrade လုပ်ထားတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ ပြီးတော့ ကားအတွင်းပိုင်းက ထိုင်ခုံနေရာတွေကိုလည်း ပြောင်းလဲထားပြီး တည်ငြိမ်တဲ့အရောင်တွေထည့်ပေးထားတာကိုလည်းတွေ့ရမှာပါ။ ဒီဇိုင်းပြန်လည်ချထားတဲ့ Honda Legend ဟာဆိုရင် Honda Sensing Driving Assist နည်းပညာ ကို ပထမဉီးဆုံးထည့်သွင်းထားတဲ့ Honda Legend generation လည်းဖြစ်ပါတယ်။
Der neue #Honda #Legend steht mit Sport Hybrid SH-AWD und umfangreichem #Sensing-Paket ab Februar 2018 in Japan bei den Händlern. Eine Einführung in Europa ist leider nicht geplant. pic.twitter.com/MpVcHvwGul
— HondaHolics (@HondaHolics) December 9, 2017
နည်းပညာပိုင်းရော၊ ကားရဲ့ ဒီဇိုင်းပိုင်းရောကိုသေချာပြန်လည် ဖန်တီးထားတဲ့ ကားဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အများကြီးမျှော်လင့်ထားလို့ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။